आज यी ३ राशिहरुलाई मिल्ने छ यति ठुलो लाभ ! चोखो मनले पाथिभरा माताको दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोला – Hamrosandesh.com
आज यी ३ राशिहरुलाई मिल्ने छ यति ठुलो लाभ ! चोखो मनले पाथिभरा माताको दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोला
मेष – (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) गरेका काम बढि खर्चालु होलान् । झुट्टा आरोप लाग्न सक्छ सतर्क हुनुहोला । प्रतीक्षा गरिएको नतिजा सकारात्मक नहुने समय छ।बौद्धिक व्यक्तित्वसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ला। अध्ययनमा समय दिन नसकिएला। गुरुजनको मार्गदर्शन अवलम्बन गर्दा फाइदा हुनेछ।अनावस्यक काममा समय खर्च हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा मन्दि आउनेछ । ।
बृष -( इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। व्यापार व्यवसायबाट सामान्य लाभ हुनेछ । मिलेर गरेका काम त्यति सफल हुने छैनन । आर्थिक संरचनालाई नचलाउनु होला । एक्लौटी काम हुनेछन् ।स्थायी सम्पत्तिमा विवाद आउने सम्भावना देखिएकाले सजग रहनुहोला। बलजफ्तीले परिस्थिति बिग्रन सक्छ। बेसुरमा दिइएको वचनले पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ कामविशेषले बन्धु–बान्धवसँग नजिकिने समय छ।
मिथुन – (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह ) काम काजमा ढिला गर्दा आफैलाई नोक्सान हुनेछ ।निर्णायक मोडमा दुविधा उत्पन्न हुने समय रहेकाले हतारमा निर्णय नलिनुहोला। हिस्सेदारसँग असमझदारी बढ्नाले पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ। फजुल खर्चमा वृद्धि हुनेछ । आफन्तबाट आलोचित हुनु पर्ला । विश्वास घातको सम्भावना देखिन्छ, व्यवसायमा हानी नोक्सानी हुन सक्छ
कर्कट – (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो ) लेनदेनका कुराले भने टाउको दुखाउनेछ । अरुको काम गरेर जश पाईने छैन ।सन्तानको बारेमा बढि चिन्तित हुनुहुनेछ । पढाईमा अवरोध आउन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।आलस्य गर्ने बानीले पहिलेकै काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ। बोलीको गलत अर्थ लाग्नाले वादविवादमा परिने सम्भावना छ। स्थायी सम्पत्तिमा पनि केही विवाद आउन सक्छ। मिहिनेत गरीकन चिताएको मूल्य प्राप्त नहुने देखिन्छ।
सिंह – (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) आफ्नो सूचना बाहिरिने सम्भावना भएकाले गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला।स्पष्ट बोल्दा आफैलाई घाटा हुनसक्छ सतर्क रहनु होला । अनावस्यक काम आईलाग्न सक्छ । विश्वास गरेकाले धोका दिने छन् अवसर प्राप्त भए पनि नियमित काममै अलमलिनाले पछि परिनेछ। पहिलेको योजना अनिश्चित बन्नेछ भने नयाँ काममा अन्योल बढ्न सक्छ।
कन्या – (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो ) प्रतिकुल परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ला ।धन दिने लिने काममा विचार गर्नु होला कहि कतै विग्रिन सक्छ । अवसरको खोजीमा निकै दौडधुप गर्नुपर्ला। आफ्नाबाटै टाढिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। खर्च गरेर पनि त्यति फाइदा उठाउन नसकिएला।घरखर्च बढ्नुका साथै अर्थ अभावले सताउन सक्छ। बनिसकेको काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ।
तुला -(र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) अनावस्यक खर्चमा सामान्य नियन्त्रण आउनेछ । काम गर्दा हेलचक्र्याई नगर्नु होला विग्रिन सक्छ । मिहिनेत गर्दा राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। तारिफयोग्य काम सम्पादन गर्दै मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ। आँटले काम सम्पादन हुनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। थोरै लगानीबाट पनि नाफा उठाउन सकिनेछ। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन् भने दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ।
बृश्चिक – (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु ) व्यर्थका काममा समय खर्च हुनेछ । मानसिक तनाव बढ्न सक्छ । ऋण लगानी नगर्नु होला डुब्न सक्छ । व्यापार व्यवसायमा पनि समस्या देखिने छन् । आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउनेछन् भने पहिलेका सहयोगीहरू पछि हट्न सक्छन्। परिस्थिति त्यति अनुकूल नरहला। अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्नेछ। जीवनशैली व्यस्त रहनेछ तर उपलब्धिविहीन काममा समय बित्न सक्छ। गरी आएको कामलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ।
धनु -( ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे ) लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । आर्थिक कारोवारमा थोरै ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । काम सम्पादन नभए पनि योजना बन्नेछ। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ।अवसर आए पनि नयाँ काममा हात हाल्नुअघि राम्ररी विचार पुर्याउनुहोला। बाध्यतामा अलमलिनुपर्दा मन खिन्न रहनेछ। श्रमपूर्वक समर्पित हुँदा पनि कामको मूल्य कम मात्र पाइने परिस्थिति देखिन्छ।
मकर – (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) काम गर्ने जोश जागर घट्ने छैन । गर्न बाँकी रहेका काम आज फस्र्योट हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । सहयोगीहरूले अप्ठ्यारो समयमा साथ दिनाले चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सकिनेछ। गोप्य रहस्य पत्ता लाग्नेछ भने नसोचेको धन लाभ हुन सक्छ। तापनि, सानातिना समस्याले केही अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा पनि अलि कमजोरी अनुभूति हुन सक्छ।
कुम्भ -( गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द ) अध्ययन कार्य अगाडि बढ्नेछ ।परिस्थिति अनुकूल रहनेछ भने लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। छोटो समयमा फाइदा उठाउन सकिनेछ। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ। विशेष उपहार प्राप्त हुन सक्छ। परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ। मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनेछ भने अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त हुने समय छ। व्यापारको बहानामा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ।
मीन – (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) फजुल खर्च बढ्नेछ । जोखिम पूर्ण काममा हात नहाल्नु होला ।सहयोगीहरू पछि हट्नाले नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न समस्या पर्नेछ। वैधानिक प्रावधानले केही अप्ठ्यारो पार्नेछ भने अधिकार सुरक्षा गर्न जुट्नुपर्नेछ। अस्वस्थताले लक्ष्यअनुसार काममा जुट्न नसकिएला। समयमा निर्णय लिन नसक्दा उपलब्धि गुम्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट अल्प लाभ हुनेछ । आय व्यय बरावरै हुनेछ ।!